मेवा खाँदा के साँच्चै गर्भपतनको खतरा रहन्छ त ? यसो भन्छन् चिकित्सक | latestnepali.com
मेवा खाँदा के साँच्चै गर्भपतनको खतरा रहन्छ त ? यसो भन्छन् चिकित्सक
सामान्यतया मेवा स्वास्थ्यका लागि स्वस्थवर्द्धधक फल हो । मेवामा अधिकमात्रामा भिटामिन ए पाइने हुँदा चिकित्सकहरुले पनि कमजोरी भएको बेला तथा विरामीहरुलाई मेवा तथा पाकेको फलफूल खान परामर्श दिन्छन् ।
तर मेवा बढी मात्रामा खानु भने खतरनाक हुन सक्ने चिकित्सक बताउँछन् । किनकी मेवामा ‘बेन्जाइल आइसोथायोसाइनेट’ पाइन्छ, जसको अधिक मात्रा शरीरका लागि विषाक्त हुन सक्छ । त्यस्तै गर्भवती महिलाका लागि पनि मेवा खानु फाइदाजनक मानिदैन । यसले गर्भपतनको खतरा हुन्छ । कतिपय डाक्टरहरु मान्छन् कि गर्भवतीले मेवा खानबाट बच्नुपर्छ । अझ काँचो मेवा त खानै हुँदैन । किनकि, काँचो मेवामा एक यस्तो इन्जाइम हुन्छ, जसले पाठेघरको खुम्च्याउन मद्दत गर्छ । जसका कारण गर्भपतन हुने खतरा बढी रहन्छ ।
पाकेको मेवामा यो इन्जाइमको मात्रा केही कम हुन्छ । तैपनि, गर्भवती अवस्थामा यसको सेवनले केही खतरा भने निम्त्याउन सक्ने उनीहरुको दाबी छ । साथै प्रसूतिपछि पनि केही हप्ता मेवा नखान उनीहरु सल्लाह दिन्छन् । यस्तो अवस्थामा मेवाको पात पनि उत्तिकै खतरनाक हुन्छ । मेवाको पातमा ‘पपाइन’ नामक कम्पाउन्ड हुन्छ जुन शिशुका लागि प्राणघातक हुन सक्ने चिकित्सक बताउँछन् । यसले शिशुमा ‘बर्थ डिफेक्ट’ पनि निम्त्याउन सक्छ ।
त्यतिमात्र नभएर मेवामा भारी मात्रामा ल्याटेक्स (चोप) हुन्छ । यसले एलर्जी गराउँछ । मेवाको बिउले पुरुषलाई नपुंसक बनाउन सक्ने चिकित्सहरु बताउँछन । यसले वीर्यमा शुक्रकीटको संख्या घटाउँछ, र शुक्रकीटको ‘मोबिलिटी’मा पनि असर गर्न सक्नेतर्फ चिकित्सकहरु सचेत रहन सल्लाह दिन्छन् ।
आलिया फकाउँदै बिजनेसमेन सलमान